यम पञ्चकको पाँचौं दिन भाइटीका, कसरी गर्ने पूजा ? – कमल खबर
Home/समाचार/यम पञ्चकको पाँचौं दिन भाइटीका, कसरी गर्ने पूजा ?
२०७६ कार्तिक १२, मंगलवार ०८:५९ गते
सगुनका रूपमा दही दिनुपर्छ । भाइटीकाका दिनमा दाजुभाइलाई लगाइदिने मखमली, सयपत्री तथा दूबोको मालाको छुट्टै महत्व छ । मखमली कहिल्यै ओइलाउँदैन, सयपत्रीको रंग कहिल्यै उडेर जाँदैन भने दूबो सधै हरियै रहन्छ ।